zimbabwe stock exchange: Zimbabwe suspends stock exchange, mobile payments over 'economic sabotage' - The Economic Times
Business News›Markets›Stocks›News›Zimbabwe suspends stock exchange, mobile payments over 'economic sabotage'
PTI Last Updated: Jun 27, 2020, 07:15 PM IST
The suspension of all mobile payments and the stock market was meant to allow "intrusive investigations".
HARARE: Zimbabwe on Friday suspended trade on the stock exchange and mobile phone-based payments to address what President Emmerson Mnangagwa's government called "criminality and economic sabotage".
"Government is in possession of impeccable intelligence which constitutes a prima facie case whereby the phone-based mobile money systems of Zimbabwe are conspiring, with the help of the Zimbabwe Stock Exchange, either deliberately or inadvertently, in illicit activities that are sabotaging the economy," the statement said.
On Tuesday, Zimbabwe's central bank began weekly foreign currency auctions in a bid to draw scarce foreign currency into the formal market. (Reporting by Nelson Banya; Editing by Olivia Kumwenda-Mtambo and Giles Elgood)
zimbabwe stock exchangecentral bank dataforeign currency tradenick mangwanazimbabwe s central bankLondon Stock Exchange